Tsy ataon’ny ORT Menabe ankilabao ny tompon-tany | NewsMada
Tsy ataon’ny ORT Menabe ankilabao ny tompon-tany
Ilaina ihany ny manao famandrihan-toerana mialoha amin’ireo trano fandraisam-bahiny amin’izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Maro ny mpizahatany tonga any amin’ny faritra Menabe, anisan’izany ny teratany, raha ny fanazavan’ny ORT (Office régional de tourisme). Ho fanomezana fahafaham-po ny teratany, indrindra ny tanora, manomana fiaraha-mivoaka ny ORT Menabe, mampilaza mialoha ireo mpianatra any amin’ny toeram-pianarana misy azy ireo.
40 na 50 no indray miaraka amin’izany tarihin’ny mpitari-dia omanin’ny ORT, mijery ny ala Kirindy na tonga hatrany amin’ny Tsingy Bemaraha. Omena fihenam-bidy manokana ireo tanora ireo sady mahita ny harena eto an-tanindrazana no manao fikarohana. 20.000 Ar, ohatra, ny mankany amin’ny ala Kirindy, anatin’izany ny saram-pitaterana sy ny fidirana ao anaty ala. Midika izany fa tsy atao ambanin-javatra ny fitsinjovana ny tompon-tany, na sakana aza amin’ny ankapobeny manerana ny Nosy ny fahefa-mividy. Ny vahiny indray no mahafantatra bebe kokoa ny zava-misy eto Madagasikara.
Ho fampiroboroboana ny fizahantany any Menabe ihany, manofana tanora ho mpitari-dia ny Antenimieran’ny varotra any an-toerana, mandritra ny enim-bolana miaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka hafa. Manao tombana ny ezaka vitan’izy ireo ny ORT sy ny ONT.